Shiinaha warshad munaarad birta birta korontada iyo soo saareyaasha | Qiangli
Munaaradda birta korontada
Minaaradda birta korantada birta birta birta birta korontada birta waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad aamin ah oo udhaxeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. 1980-yadii, dalal badan oo adduunka ka mid ah waxay bilaabeen inay adeegsadaan astaamaha biibiile bir ah qaab dhismeedka munaaradda markii la horumarinayo khadadka gudbinta UHV. Minaarada birta birta leh oo leh tuubooyin bir ah sida maaddada ugu weyn u muuqatay. Japan gudaheeda, munaaradaha tubbada birta ah waxaa loo isticmaalaa khadadka 1000kV UHV iyo munaarado. Waxay ...
Minaaradda korontada xagasha korontada waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad gaar ah oo ammaan ah oo u dhexeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta.
1980-yadii, dalal badan oo adduunka ka mid ah waxay bilaabeen inay adeegsadaan astaamaha biibiile bir ah qaab dhismeedka munaaradda markii la horumarinayo khadadka gudbinta UHV. Minaarada birta birta leh oo leh tuubooyin bir ah sida maaddada ugu weyn u muuqatay. Japan gudaheeda, munaaradaha tubbada birta ah waxaa loo isticmaalaa khadadka 1000kV UHV iyo munaarado. Waxay leeyihiin cilmi baaris qoto dheer oo ku saabsan tiknoolajiyada qaabeynta ee tiirarka biibiilaha birta.
Iyada oo lagu sawirayo khibrad shisheeye, astaamaha biibiileyaasha biraha ayaa loo adeegsaday 500kV Double Circuit Tower iyo afar munaaradood oo ku teedsan isla munaaradda Shiinaha, taas oo muujineysa waxqabadkeeda iyo faa iidadeeda wanaagsan. Sababtoo ah qallafsanaanteeda qaybta weyn, astaamaha culeyska iskutallaabta wanaagsan, culeyska fudud, muuqaalka quruxda badan iyo faa'iidooyinka kale ee muuqda, qaab dhismeedka munaaradda tuubbada ayaa si wanaagsan loogu soo saaray khadadka heerarka danab ee kala duwan. Gaar ahaan, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qaabdhismeedka ballaaran iyo qaabdhismeedka munaaradda ee shabakadda korantada.
Iyada oo horumarka joogtada ah ee warshadaha birta Shiinaha, wax soo saarka ee birta xoogga sare mar dambe ma adka. Tayada birta qaabdhismeedka adag ee Shiinaha ayaa si dhakhso leh oo joogto ah loo hagaajiyay, kanaalka keena wuxuu noqday mid sii kordhaya, kaas oo bixiya suurtogalnimada in loo isticmaalo bir xoog badan oo ku jirta munaaradaha khadka gudbinta. Mashruuca horudhaca ah ee cilmi baarista ee xariijinta gudbinta ee 750 kV, Machadka Cilmi baarista Awoodda Korontada ee hay'adda awoodda dowladda wuxuu bartay qaab dhismeedka iskuxirka wadajirka ah, qiimaha cabbirka cabbirka qeybaha, iskudhafyada iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee lagu wajihi doono isticmaalka birta xoogga badan . Waxaa loo tixgeliyaa in birta xoogga sare leh ay si buuxda u buuxisay shuruudaha loogu isticmaali karo munaaradda teknoolojiyada iyo arjiga, iyo isticmaalka birta xoogga badan waa la yareyn karaa Culeyska munaaraddu waa 10% - 20%.
Hore: 2018 Tayada Wanaagsan ee Tayada Wanaagsan - Minaaradda birta xagal koronto - Qiangli
Xiga: Munaaradda birta korontada
Tower Xaraynta Power Steel
Tower Tower Xagasha Electric
Taawarrada birta korontada
Minaaradda birta korantada birta birta birta birta korontada birta waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad aamin ah oo udhaxeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo kororka degdegga ah ee dhaqaalaha qaranka, warshadaha tamarta ay si deg deg ah u horumartay, taas oo sare u qaadday horumarka degdegga ah ee warshadaha taarikada xariiqda gudbinta. Sida laga soo xigtay tirakoobka, dakhliga iibka ee wershadaha munaaraddii laydhka gudbinta ee ...
Taawarka birta korantada Korontada Iyadoo la horumarinayo xilliyada, munaaradaha xoogga waxaa loo kala saari karaa iyadoo la raacayo qalabka dhismaha, noocyada qaabdhismeedka iyo howlaha la adeegsanayo. Marka loo eego badeecadaha kala duwan, isticmaalkoodu sidoo kale wuu ka duwan yahay. Aynu si kooban u sharaxno kala-soociddooda iyo adeegsigooda ugu waaweyn: 1. Sida ku cad qalabka dhismaha, waxaa loo qaybin karaa qaab-dhismeedka alwaax, qaab-dhismeedka birta, qaab-dhismeedka aluminium iyo dhisme taamiko ah oo la xoojiyey. Sababtoo ah ...
Minaaradda birta korantada birta birta birta birta korontada birta waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad aamin ah oo udhaxeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. Iyadoo kororka joogtada ah ee baahida korontada Shiinaha, isla waqtigaas, ay ugu wacan tahay yaraanta kheyraadka dhulka iyo hagaajinta shuruudaha ilaalinta deegaanka, dhibaatooyinka xulashada dariiqa laynka iyo duminta dhismooyinka ku teedsan khadka ayaa sii ...
Minaaradda birta korantada birta Minaaradda birta xagalka waa tiir saxan oo leh soo-dejiye. Aagga xumbadu waxay ka kooban tahay bir xagal ah oo is barbar socda, iyo jihada habaynta ee birta xagasha waxay la siman tahay jihada socodka dareeraha. Cirifka fiiqan ee birta xagasha wuxuu ku yaal qaybta hoose, qaybta isgoyskuna waa qaab "V". Waxaa jira farqi gaar ah oo u dhexeeya labada biraha xagasha isku xiga. Soo-dejiyayaashu waxay la mid yihiin saxaaradda guud. Dareeraha waxaan ...
Jiaozhou City, Gobolka Shandong, Jiaozhou Industrial Park Road wadada 1aad ee adag
Qaab dhismeedka birta tuubada, Taawarka Isgaarsiinta Dowladda Hoose, Tower Tower Xagasha Electric, Qaab dhismeedka Birta Prefab, Taawarrada birta korontada, Tower Xaraynta Power Steel,